Momba anay - Daxin Machinery Co., Ltd.
Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd.dia orinasa matihanina mamokatra fitaovana miasa amin'ny habakabaka. Ny orinasa dia miompana amin'ny famolavolana, fampandrosoana, famokarana ary fivarotana fitaovam-piasana an'habakabaka. Ny Machines Daxin dia miantsoroka ny fanomezana fitaovana avo lenta sy avo lenta ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa, manatsara hatrany ny vokatra efa misy, ary mandefa andiam-bokatra vaovao hamaly ny filan'ny mpanjifa samy hafa. Ny vokatra dia manana ny mampiavaka ny fitaovana vaovao, fananganana azo antoka ary fandidiana azo antoka. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fisafoana avo lenta, fametrahana sy fikojakojana ireo orinasa indostrialy sy fitrandrahana, lalamby, lalambe, seranam-piaramanidina, sambo, herinaratra elektrika ary indostria hafa; fitantanana entana, fitaterana ary fametrahana ao anaty trano fitehirizana, docka, ary tsipika famokarana; Kianja, efitrano fivoriana ary tranobe avo hafa Tsy fantatra ny sary, haingon-trano, fikojakojana ary asa fanadiovana sns, afaka manatsara ny fahombiazan'ny asany.
Ny orinasa dia manana fanapahana lehibe, hiondrika, welding, famafazana sy fitaovana matihanina hafa, ary koa ekipa injeniera teknika matihanina sy mpiasa matihanina aorian'ny fivarotana. Ny orinasa dia manana fikambanana matanjaka, fahaiza-manao ara-teknika sy azo ampiharina amin'ny mpiasa, fandaminana mahomby, ary fanohanana azo antoka amin'ny lojika. Izy io dia mampifangaro ireo serivisy famokarana, varotra ary fanofana mba hanomezana ny mpanjifa samihafa ny fitaovana sy serivisy mety indrindra.
Masinina Qingdao Daxin manaraka ny filozofia momba ny "asa mifototra amin'ny olona, ​​manara-penitra, manao ny asan'ny mpisava lalana sy manavao, ary mahomby", manenjika ny fanahin'ny orinasa "fanavaozana, fikatsahana fahamarinana, fahitsiana ary fahamboniana", miasa am-pahavitrihana ny hetsiky ny vondrona sy ny paikadim-barotra iraisampirenena, ary miasa ho an'ny fitaovana an'habakabaka Ny vokatra fampandrosoana teknolojia dia nahatratra vokatra mahomby. Miantehitra amin'ny tombony ara-teknolojika, tombony amin'ny fanavaozana ary tombony amin'ny marika, nihatsara haingana ny fanavaozana ankapobeny sy ny fahaiza-manao feno, miaraka amin'ny tanjona ho lasa mpanamboatra fitaovana an'habakabaka kilasy voalohany sy malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Vokatra lehibe: fibatana hety, fiakarana fiara, fiakarana entana, sehatra fiasan-drivotra aliminioma, fisondrotana amin'ny seza misy kodiarana, fiakarana boom, kamiao miasa an'habakabaka avo lenta, mpandidy entana, stacker, dock ramp sns.